कर्णालीका सुइना- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
नाटक ‘सुइना कर्णालीको’ मा देखिएका कतिपय सपना पूरा भइसकेका छन् । अहिले हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्, अप्ठ्यारोमा परेका सुत्केरी र गर्भवतीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिन्छ ।
फाल्गुन ३०, २०७५ राजबहादुर शाही
मुगु — उमेरले ७० कटेका पूर्णबहादुर विश्वकर्मा ७ वर्षीया बिरामी नातिनीको उपचार गर्न घरबाट हिँड्छन् । बाटोमा झमक्क साँझ पर्छ । दायाँबायाँ छिटपुट घर छन् तर दलित भएकै कारण बास पाउँदैनन् । बल्लतल्ल गोठमा ओत लाग्न पाए पनि खानेकुरा दिइँदैन । राति बिरामी नातिनी ‘भोक लाग्यो’ भन्दै मुख बाउँछिन् ।
कर्णालीको मुगुमा परम्परागत पोसाकमा सजिएका चेलीहरू । तस्बिर : राजबहादुर/कान्तिपुर
उनी झोलामा भएको एकमुठी कागुनोको चामल दिन्छन् । चिन्डो (पानी बोक्ने भाँडो) को पानीले घाँटी ओसिलो पार्छन् । भोलिपल्ट बिहानै उठेर नातिनीलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल पुर्‍याउने योजनासहित निदाउँछन् । एकछिनमै देख्छन् सुइना (सपना) ।
पूर्णबहादुरले देखेको सुइना यस्तो हुन्छ– केही दिनदेखि देशका प्रधानमन्त्री कर्णाली प्रदेशमा आउने खबर टेलिभिजनका पर्दामा निरन्तर आइरहन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको विशेष विमानबाट प्रधानमन्त्री आउने खबरले जनता निकै उत्साही हुन्छन् । हेर्दाहेर्दै प्रधानमन्त्रीसहित उनको टोली कर्णाली प्रदेशको राजधानी सिँजा पुग्छ । स्थानीय परम्पराअनुसार उनीहरूको स्वागत हुन्छ ।
मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीले स्थानीय रूपमा उत्पादित ऊन, कपासको लुगा लगाएका छन् । सबैले कुनै न कुनै काम गरिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको कुनै पनि जमिन बाँझो छैन । जताततै धान, कोदो, जौ, गहुँ, फापर, आलु, चिनो, कागुनो, स्याउ, ओखर र जडिबुटी लगाइएको छ । कर्णालीबाट बर्सेनि १० हजार मेट्रिक टन अनाज बाहिरिन्छ । व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाका लागि ठूल्ठूला विश्वविद्यालय छन्, जहाँ अध्ययन गर्न देश–विदेशका विद्यार्थीको घुइँचो छ ।
आफ्नै भाषाको विश्वविद्यालयसमेत सञ्चालनमा छ । कर्णालीका सबै स्थानमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल छन् । विदेशबाट समेत बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । खोलानाला र नदीबाट उत्पादित हजारौं मेगावाट विद्युत् बाहिर निर्यात हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र छन् । यहाँ उत्पादित औषधि विश्व बजारमा निर्यात हुन्छ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योगमा विभिन्न देशका कामदार छन् । हिमाली क्षेत्रमा केबुलकार र रेल छन् । सबैका हातमा अत्याधुनिक सञ्चार उपकरण छन्, जसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
आफ्नै मौलिक कला–संस्कृति छ । प्रदेशका मन्त्री, कर्मचारी र नागरिक भाषण गर्नभन्दा काममा व्यस्त रहन्छन् । प्रदेशको सुरक्षा मामिला निस्फिक्री छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री कसैका पनि निजी सुरक्षाकर्मी छैनन् । नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफैं गरेका छन् । कर्णालीका कुनै गाउँबस्ती सडकविहीन छैनन् । जताततै कालोपत्रे सडक, सडकको दायाँबायाँ हरियाली । गाउँ–गाउँमा हेलिप्याड ।
दैनिक सरदर ४० वटा उडान हुन्छन् । त्यति मात्र हो र ? प्रदेशमा १० अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल छन्, जहाँबाट दैनिक ६० जहाजले उडान भर्छन् । प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम मेट्रो रेलले जोडिएका छन् । प्रदेशभर ६ सय त मट्रो रेल छन् । जातीय, लैंगिक विभेद छैन । स्थानीयले एटीएम कार्डमार्फत सामान किनमेल गर्छन् । कर्णाली नेपालकै सम्पन्न प्रदेशका रूपमा छ ।
भ्रमणक्रममा यस्तो देखेपछि प्रधानमन्त्री चकित पर्छन् । काठमाडौं फर्किन लाग्दा संघीय सरकारका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन माग गर्छन् । ५ अर्ब अनुदानको अपेक्षा गरेका प्रधानमन्त्रीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले १० अर्ब दिने निर्णय गर्छ । प्रधानमन्त्री खुसी हुँदै काठमाडौं फर्किन्छन् । यता बिहानीको सिरेटोले पूर्णबहादुरको निद्रा भंग हुन्छ । नातिनीलाई ब्युँझाएर उपचारका लागि हिँड्ने हतारो गर्छन् । विडम्बना ! नातिनी कहिल्यै नउठ्ने गरी सुतिसकेकी हुन्छिन् ।
देश संघीयतामा जानुभन्दा करिब ७ वर्षअघि २०६६ सालमा लेखिएको ‘सुइना कर्णालीको’ अहिले झन् सान्दर्भिक बनेको छ । छायानाथ रारा नगरपालिका–१, ठिनीगाउँका सुमन मल्लद्वारा लिखित नाटकको निर्देशन आरोहण गुरुकुलका सुनील पोखरेलले गरेका थिए । नाटकले उति बेलै काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा निकै चर्चा बटुलेको थियो ।
गुरुकुलको थिएटरमा प्रदर्शन भएको नाटक हेर्न मन्त्रीदेखि कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । ‘हामीले देख्न चाहेको कर्णाली सुइना (सपना) मा देखिएजस्तो समृद्ध प्रदेश हो, अभावमा अल्झिएको प्रदेश होइन,’ मल्ल भन्छन्, ‘अहिले कर्णाली रोग, भोक र गरिबीले च्यापिएको छ ।’ सुइनामा रूपान्तरण गरिएको अभावपूर्ण कर्णाली र अहिलेको कर्णालीमा खासै परिवर्तन नपाइएको उनले बताए ।
मल्लको विचारमा संघीयताले कर्णालीमा समृद्धि ल्याउनुपर्ने हो तर झन् विकृति भित्र्याएको छ । जनताले झन् दुःख पाएको उनी बताउँछन् । ‘बजेटमा जनप्रतिनिधिको हालिमुहाली छ, विकास कागजमा सीमित छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘यसले जनतालाई निराश बनाएको छ ।’
नाटकभित्रका केही सुइना भने विपनामा परिणत भएको नाटककार मल्लको भनाइ छ । हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । अप्ठेरोमा परेका सुत्केरी र गर्भवतीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिन्छ । जुम्लामा डाक्टरी पढाइ हुने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ । गरिबका छोराछोरीका लागि डाक्टर बन्ने अवसर आफ्नै आँगनमा आएको छ । गाउँ–गाउँमा मोबाइल फोन पुगेको छ । कर्णालीमै बसेर देश–विदेशका आफन्तसँग कुरा गर्न पाइन्छ । कर्णालीका विद्यार्थीले फाटेकापुस्तक पढ्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि नाटककार मल्ल कर्णालीलाई सुइनाभित्रकै जस्तो देख्न चाहन्छन् । कर्णाली सबै प्रदेशभन्दा समृद्ध हुनु नाटकको परिकल्पना हो । सबैभन्दा पहिले नामकरण र स्थायी राजधानी तोकेर उत्साह जगाएको प्रदेश सरकारले अझै स्पष्ट गति लिन सकेको छैन । ‘काम गर्नेभन्दा भाषण गर्नेको बाहुल्य देखिन थालेको छ,’ मल्लले भने, ‘बेरोजगारी समस्या र गरिबी कम हुनुको साटो झन् बढिरहेको छ ।’
सुइना कर्णाली वर्तमानको यथार्थ चित्रण हो भने भविष्यको स्वर्णिम कल्पना । नाटकमा पूर्णबहादुरको भूमिका लेखक स्वयंले गरेका छन् । इरानी सुन्दरी भामले नातिनी, कविराज भामले मुख्यमन्त्री र सूर्यमणि हमालले प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । नाटकमा नन्दप्रसाद खत्री, राज्यलक्ष्मी मल्ल, तारा खत्री, आशिषकुमार मल्ल, माया खडका, पूर्णबहादुर भाम, कमल नेपाली, धनबहादुर बिटालु, लक्ष्मण रोकाया र गगनबहादुर बुढाले विभिन्न भूमिकामा अभिनय गरेका छन् ।
मल्लले २०६५ सालमै ‘कर्नाली दख्खिन बग्दो छ’ नाटक लेखे । यसमा सुइना कर्णालीको विपरीत पीडैपीडा भरिएको छ । गरिबीका कारण श्रमका लागि भारततिर भासिने युवा श्रमशक्तिको कथा यसमा उल्लेख छ । उक्त नाटकमा हुडेको भूमिकामा रहेका मल्ल अहिले पत्रकारका रूपमा कार्यरत छन् । ‘समय परिस्थितिलाई उजागर गर्ने ऊर्जा भए पनि आर्थिक अल्झनले बाधा पुर्‍याउँदो रहेछ,’ मल्ल भन्छन्, ‘नाटकलाई पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गर्ने सोच भए पनि आर्थिक कारणले सम्भव छैन ।’ उनले सुइना कर्णालीकोलाई नेपाली र अंग्रेजीमा रूपान्तरण गर्ने सुनाए ।
नाटकका अन्य पात्र पनि आ–आफ्नै पेसामा रमाइरहेका छन् । इरानी सुन्दरी भाम काठमाडौंमा अध्ययन गर्दै गीत–संगीतमा छिन् । एक समय चर्चाको शिखरमा रहेको सुइना कर्णालीको अहिले सन्दर्भ मिल्दासमेत सेलाएको छ । नाटकका एक पात्र गगनबहादुर प्रदेश र संघीय सरकारले यसलाई प्रवर्द्धन गरी कर्णालीको समृद्धिमा शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कर्णालीको व्यथालाई ढाक्ने होइन, उजागर गरेर समृद्धिको सूत्र पहिल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समृद्धि भन्ने कुरा सेतो कागजमा मसीले रंग्याएर आउँदैन, व्यवहारमा तल्लिन हुनुपर्छ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:५८
पोखरा र काठमाडौंमा जापानी फिल्म फेस्टिभल
काठमाडौँ — जापान भन्नेबित्तिकै पैंयु साकुरा फूलको चर्चा हुन्छ । पैंयु प्रजातिको यो फूल छिट्टै फुल्छ र झर्छ । जापानी फिल्म ‘हाना नो अतो’ मा युवती इतो यही साकुरा बगैंचामा उभिरहेकी छन् । यहीँ पहिलो पटक भेटछन् उनले मनपर्ने मान्छे । तर, उनको प्रेम साकुराको फूलजस्तै झरिगएको उनलाई पत्तै हुँदैन । प्रेमीले संसार छोडे पनि उनी यादहरूमा बाँचिरहन्छिन् र तिनै यादलाई शक्तिमा बदल्दै एउटा रहस्यको पर्दाफास गर्छिन् ।
सामुराई परिवारमा जन्मेकी एक युवतीले आफ्नो प्रेम पाउन गरेको संघर्ष कथामाथि बनेको फिल्म ‘हाना नो अतो’ (आफ्टर द फ्लावर्स) सन् २००९ मै बनेको हो । नेपालीलाई छाडेर हिन्दी र अंग्रेजी फिल्मले रजाइँ गर्ने हाम्रा हलहरूमा यस्ता फिल्म हेर्ने अवसर जुर्ने कुरै भएन ।
केन्जी नाकानिसीले निर्देशन गरेको यो अर्थपूर्ण प्रेमकथा बोकेको फिल्म राजधानीमा देखाइँदै छ । जापानी दूतावास र जापान फाउन्डेसनले गर्न लागेको जापानी फिल्म फेस्टिभलमा यसपटक यो फिल्म पनि परेको छ । फिल्ममा जापनी अभिनेत्री केइको कितागावा अभिनेता सुनतारो मियाओ, मासाहिरो कोमोतोलगायतको मनछुने अभिनय र उनीहरूको संघर्ष हेर्न सकिन्छ ।
प्रेमकथाको केन्द्रमा छिन्, इतो (केइको कितागावा) । साकुरा बगैंचामा एक झल्को देखभेट भएकै कारण मागोशिरो (सुनतारो मियाओ) सित प्रेममा परेकी इतोले आफ्नो प्रेम प्राप्तिका लागि गरेको प्रयास लोभलाग्दो छ । उनले आफ्नो प्रेम र आत्मसम्मानका लागि गरेको संघर्षले फिल्मलाई अघि बढाएको छ ।
मध्यकालीन समान्ती समाजको बेला जापानमा उदय भएको लडाकु सामुराईहरूको अनुशासन, उनीहरूको संस्कृति र सिकाइ प्रक्रिया पनि फिल्ममा बोनसको रूपमा उपलब्ध छन् । सामुराई परिवार बीचमै हुने षड्यन्त्र र केटाकेटीलाई नसोधी छिन्ने विवाह परम्पराको कारण इतोले प्रेमी गुमाउँछिन् । तैपनि उनी आफ्नो बाबुबाट प्राप्त गरेको तरबार विद्यालाई प्रयोग गर्दै अघि बढछन् र प्रेमीको दुश्मनलाई सिध्याउँछिन् ।
शुक्रबारदेखि पोखराबाट सुरु हुने फेस्टिभलमा अन्य फिल्म पनि छानिएका छन् । एनिमेसन, लभ ड्रामा, कमेडी, साइफाईदेखि बालबालिका केन्द्रित फिल्मसम्म । पोखराको गैरापाटनस्थित च्याम्बर अफ कमर्सको हलमा सिनोभु याजुचीको ‘सर्भाइभल फ्यामिली’, रिउता ताशाकीको ‘नान्जी किड्स्’, याशुहिरो योसिउराको ‘टाइम अफ इभ द मुभी’, ओसामु मिनोरिकावाको ‘इट्स अ ब्युटिफुल लाइफ’ देखाइने जापानी दूतावासका सांस्कृतिक विभागका ईश्वरीप्रसाद भट्टले जनाए ।
त्यस्तै राजधानी काठमाडौंको आर्मी अफिसर्स हलमा हुने मार्च २२ देखि हुने फेस्टिभलका लागि पाँचवटा फिल्म छानिएका छन् । फरक फिल्मको स्वाद चाख्न रुचाउने राजधानीका दर्शकले मोकोटो सिन्काईको रोन्मान्टिक एनिमेसन ड्रामा ‘फाइभ सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड’, नाओकी मियाहाराका एनिमेसन फिल्म ‘पोप इन क्यु’, नाआतो कुमाजावाको रोमान्टिक कमेडी ‘फ्रम मु टु यु’, अकिरा आगाटाको ‘द रेसिपे अफ फर्च्युन’ र केन्जी नाकानिसीको ‘हाना नो अतो’ हेर्न पाइनेछन् ।
जापानी समाज, संस्कृति, सपना र मनोविज्ञान बुझ्न फिल्म फेस्टिभलले सघाउने भट्टले बताए । जापानी ल्यांग्वेज टिचर्स एसोसियशन (जाल्टान) सँगको सहकार्य रहेको फेस्टिभलमा जापानी दूतावास र जाल्टानले फ्री पास उपलब्ध गराउने विज्ञिप्तिमा जनाइएको छ । हरेक वर्ष पोखरा र काठमाडौंमा फेस्टिभल हुँदै आएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:५६